သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက် ခွီလို့ကောင်းမယ့် …. ဒရယ်ကျွန်းကမ်းခြေ – တိမ်တိုက်ထွန်း ရေးတဲ့စာ
သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက် ခွီလို့ကောင်းမယ့် …. ဒရယ်ကျွန်းကမ်းခြေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျော်တို့မသိတဲ့ကမ်းခြေတွေ အများကြီးရှိပါသေးလားဆိုတာ ခရီးတွေသွားရင်း တစ်ဖြည်းဖြည်း သိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒရယ်ကျွန်းကမ်းခြေဆိုတာကိုလည်း မထင်မှတ်ဘဲရောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ချစ်စရာကောင်းသလောက် ကမ်းခြေလည်းသိပ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ အဓိက တော့ လူရှင်းတယ်၊ သဘာဝအငွေ့အသက်တွေမပျောက်သေးလို့ ပကတိခံစားမှုကိုရတယ်၊ ငါးဒိုင် ပုစွန် ဒိုင်တွေနဲ့နီးတော့ ပင်လယ်စာကိုကောင်းကောင်းစားရတယ် အဲဒီလို အားသာချက်တွေ ဒရယ်ကျွန်း ကမ်း ခြေမှာရှိပါတယ်။
ဒရယ်ကျွန်းကမ်းခြေဟာ ဧရာဝတီတိုုင်းဒေသကြီး၊ ငရုတ်ကောင်းမြို့မှာရှိပါတယ်။ ငရုတ်ကောင်းဆိုလို့ ဂေါ်ရင်ဂျီနဲ့တွဲမြင်မိပေမယ့် တကယ်တော့ သပ်သပ်စီဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးကနေ ငရုတ်ကောင်းမြို့ကို သွားတဲ့ကားစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီဗာဆယ်နဲ့ ကံထူးအောင်ဆိုပြီး ကားလိုင်းနှစ် ခုရှိပါတယ်။ တစ်ကြောင်းကို တစ်သောင်းပေးရပြီး ဆယ်နာရီဝန်းကျင်လောက်စီးရပါတယ်၊ ကားမြန်ရင် တော့ ရှစ်နာရီလောက်ပဲစီးရပါတယ်။ ငရုတ်ကောင်းမြို့မှာ ကားရပ်တာနဲ့ ကမ်းခြေကိုရောက်ပြီလို့ဆို ရမှာပါ။ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လမ်းနည်းနည်းကြမ်းတော့သတိ ထားပြီးမောင်းရမယ်။
ငရုတ်ကောင်းမြို့ကိုကားရပ်တာနဲ့ ကမ်းခြေသွားချင်လို့ပါဆိုပြီးတွေ့တဲ့သူကိုသာမေးလိုက် သေသေချာ ချာညွှန်ပြပါတယ်။ သူတို့မြို့ရဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေဟာ ဒရယ်ကျွန်းကမ်းခြေပါပဲ။ ရာသီဥတုသာယာတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ကမ်းခြေအထိကားမောင်းသွားလို့ရပါတယ်။ ပွင့်လင်းရာသီအစဆိုရင်တော့ ကမ်းခြေဆီ ကို လမ်းလျှောက်ဖို့သာသာယာယာလမ်းလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းလျှောက်သွားရုံပါပဲ။ အုန်းပင် အပိုင်းတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ ဦးပိန်တံတားအသေးစားလေးကိုလည်းဖြတ်သွားရတာ အမိုက်စားပါပဲ။ တောလမ်းလေးတစ်ချို့ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် ကမ်းခြေကြီးကိုဘွားခနဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဟာ ဒရယ် ကျွန်းကမ်းခြေပါပဲ။
စက်စဲကမ်းခြေနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ လူရှင်းတာကိုပြောချင်တာပါ။ ငွေဆောင်တို့ ငပလီတို့လို သပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့သိပ်မရှိပေမယ့် အေးအေးလူလူသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ရေတွေတော့သိပ်မသန့်ပါဘူး။ ကမ်းခြေကအရိုင်းနည်းနည်းဆန်တာမို့ ဂဏန်းတွေဖွေးခနဲဖွေးခနဲ လျှောက်သွားနေတာကိုတော့ အထင်းသားမြင်ရမှာပါ။ သဲသောင်ပြင်ညီနေတာမို့ဘောလုံးကန်မလား၊ ရေဆော့မလား ကမ်းခြေဖီလင်အပြည့်ရပါတယ်။ တည်းဖို့ခိုဖို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ကမ်းခြေအနီး တစ်လျှောက်မှာ ဘန်ဂလိုလေးတွေတန်းစီဆောက်ထားပါတယ်။ ပိုင်ရှင်တွေဆီကိုပြောပြီးတည်းလို့အ ဆင်ပြေတာပေါ့။ အခြား Beach တွေလိုမျိုးသပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့မရှိပါဘူး။ ကျော်တို့မေးခဲ့တဲ့ ဘန်ဂလို ဆိုရင် ရှစ်ယောက်တည်းလို့ရတယ်။ တစ်ညကို သုံးသောင်းပဲယူတယ်တဲ့။ အထဲမှာရေချိုးခန်း ဘာညာ ပါပေမယ့် အိမ်သာကတော့ အပြင်ဖက်မှာ ဘုံသွားရတယ်။ ဆိုတော့ သီးသန့်သွားချင်နေချင်တဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ မကိုက်ဘူးရယ်။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက် လူရှင်းတဲ့ကမ်းခြေမှာ အပြတ်ခွီ မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ။
အစားအသောက်လား။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘန်ဂလိုပိုင်ရှင်တွေကိုချက်ခိုင်းလို့ရတယ်။ ကျော်တို့သွား နေကျ ချောင်းသာထက်စျေးပိုတန်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီမြို့က ငါးဒိုင်ပုဇွန်ဒိုင်တွေတော်တော် များတဲ့မြို့ဖြစ်နေတာမို့ စျေးပေါပေါနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်လေ။ ပုစွန်၊ ဂဏန်း၊ ပြည်ကြီးငါး စတဲ့ပင်လယ်စာ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့။ ရေဆော့မယ်ဆိုရင်လည်း ဘောကွင်းငှားတဲ့နေရာ ဘော လုံးငှားတဲ့နေရာလေးတွေရှိပါတယ်။ အုန်းသီးနုနုလည်းဖောက်သောက်လို့ရတယ်။ ကျော်တို့အုန်းရည် သောက်ချင်လို့ပါဆိုပြီး အော်သာပြောလိုက်အနားမှာရှိတဲ့ ဘန်ဂလိုငှားစားတဲ့မိသားစုတွေထွက်လာပြီး အုန်းသီးခွဲပေးတယ်ဗျ။ နှစ်လုံးကို ၁၅၀၀ ပဲယူလိုက်တယ်။ သဘောလည်းကောင်းတယ်။
သိပ်ရှိတာပေါ့။ ဂေါ်ရင်ဂျီနဲ့နီးတယ်လေ။ ဆိုတော့ ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းကိုစက်လှေနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ စက်လှေခက လူအနည်းအများအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်ပင်လယ်ထဲမှာ စက်လှေပတ်စီးပြီး လိပ်ချိုင် ကြွေချိုင်တို့အပြင် မိကျောင်းကျွန်းတို့ကိုလည်းသွားလည်လို့ရတယ်။ ကိုယ်တည်းတဲ့ ဘန်ဂလို ကိုပြောလိုက်ရုံပဲ။
ဆိုတော့ကာ ပိတ်ရက်မှာ ခက်ခဲတဲ့ခရီးကိုသွား ပျော်ပျော်ပါးပါးခွီကြမယ်ဆိုရင်တော့ လူရှင်းတဲ့အဲဒီနေ ရာလေးက အကောင်းချည်းမဟုတ်ပေမယ့် မဆိုးလှဘူးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ သွားလို့ပျော်လို့ရပါတယ်။
Categoriesခရီးသွား, ပြည်တွင်း TagsDayal Island, Travel
Previous PostPrevious အန်ကောဒေသ၌ ရတနာသိုက်ရှာဖွေခြင်း
Next PostNext ရန်ကုန်မြို့မှာ တက်သင့်တဲ့ ပညာဒါန အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း (၇) ကျောင်း